Xog-Warran: Maxaa ka jiro inay Puntland weerar ku tahay Gobollada Sool iyo Sanaag? - Caasimada Online
Home Warar Xog-Warran: Maxaa ka jiro inay Puntland weerar ku tahay Gobollada Sool iyo...
Xog-Warran: Maxaa ka jiro inay Puntland weerar ku tahay Gobollada Sool iyo Sanaag?
Garoowe (Caasimada Online) – Waxaa soo baxayo warar sheegayo in maamulka Puntaland ay isku diyaarinayaan weerar ay ku qaadaan Gobolada Sool iyo Sanaag sida ay illo wareedyo ku dhaw dhaw saraakiisha Puntland xaqiijinayaan.
Taliyaha ciidamada Puntland ayaa lagu soo waramayaa inay lagu wargeliyey inuu ciidamo badan u diyaariyo howlgalkaas lagu doonayo inay Puntalnd gacangteeda soo gelisay Soon iyo Sanaag.
Waxaa jiro siyaasiyiin badan oo kasoo jeedo Puntland kuwaas oo ka hor imaaday qorshaha lagu doonayo in lagu weeraro sool iyo Sanaag waxayna ku tilmaameyn arrintaas inay tahay mid qaldan oo ay dowladda kaligeed go’ankaas gaartay.
Madaxweynaha Puntland Cabdiweli Gaas ayaa la sheegay inuu yahay shaqsiga go’aankaas qaatay wuxuuna rabaa inuu maalmaha soo socdo dagaalkaas qaado isagoo iska indha tirayop talada ay siinayaan qaar kamid ah sarakiisha ciidamada Puntland.
Maamulada Puntland iyo Somaliland ayaa horey u dagaalamay dhawr jeer waxaana halkaas ka dhashay khasaaro isugu jiro naf iyo maal waxaana dagaaladii ugu dambeeyey lagu kala qabsaday maxaabiis inkastoo markii dambe lagu heshiiyey in la is dhaafsado.
Wixi warar ah ee arrintaan kusoo kordha waan idinla soo socdosiin doonaa Inshaa